August | 2015 | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
August 31, 2015 drkokogyi
We want the proof of the father of Rakhine leader Dr. Aye Maung, if he is notabastard!
August 30, 2015 drkokogyi
ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကို ကြည့်ပြီးနိုင်ငံသားအဖြစ် သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်လည်း နိုင်ငံတကာသိအောင် တရားဝင်ကြေငြာလိုက်ပါ
စစ်တပ်နဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ က၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရှုံးလည်းအနိုင်ဆိုတဲ့ အသံ ထွက်လာ
၁၉၃၉ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့မှာ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့တယ်။
ကိုဗဟိန်း၊ ကိုသိန်းဖေ၊ ကိုလှဖေ တို့ပါဝင်ပြီး ကိုအောင်ဆန်းက အတွင်းရေးမှူး တာဝန်ယူ ခဲ့တယ်။
၁၉၄၁ မှာ ဖတပလ အဖွဲ့ကြီးကို တည်ထောင်နိုင်ပြီး သခင်စိုးက နိုင်ငံရေး သခင်အောင်ဆန်းက စစ်ရေး တာဝန်ယူပြီး လှုပ်ရှားခဲ့ကြတယ် …။
Why Islamophobia? ﻿” မွတ်ဆလင်မ်တွေ ဘာလုပ်မိလို့မုန်း ? ” (သို့) “အဖြေမရှိသော မေးခွန်းများ”
” မွတ်ဆလင်မ်တွေ ဘာလုပ်မိလို့မုန်း ? ” (သို့)
ပြောချင်တာက ဒီလူတွေကို ဒီမွတ်ဆလင်မ်တွေကို ဒီကုလားတွေကို အမုန်းကြီး မုန်းတယ်လို့ ပြောခံရလောက်အောင် ဘာလုပ်ဖူးသလဲ၊ ဘာလုပ်ခဲ့ကြသလဲ၊
ထောက်ပြ ပြောပြနိုင်သူတွေရှိရင် ပြောပြပေးကြပါ။ ဘုမသိ ဘမသိ သူများယောင်ခိုင်းတိုင်း လိုက်ယောင်၊ အလကားနေရင်း မုန်းနေမိမှာစိုးလို့ ငရဲတွေရနေမှာစိုးလို့ ဒီစာတိုလေးကို ရေးမိပါတယ်။ အဆုံးထိ ဖတ်ကာ မှားနေတဲ့နေရာကို တွေ့တာနဲ့ အားမနာတမ်း ထောက်ပြဖို့လည်း တိုက်တွန်းပါတယ်။
Wirathu isaPhoot Kyar or Monitor Lizard andaSNAKE-CHARMER bitten by Viper snake
August 28, 2015 drkokogyi
IF with DASSK, he praises and supports her BUT
when with the USDP Generals he just changed side supporting them.
When meets the International media at Foreign countries especially in Malaysia, Iran or other countries he talks about Interfaith and praises the Islam.
But as the second head of Ma Ba Tha he becameaRacist.
“FireChat” For future Myanmar Protesters against Myanmar Military Dictators
For Myanmar Protesters’ use in Future Protests against Myanmar Military and USDP Government
August 28, 2015 August 28, 2015 drkokogyi
Bersih4adopts HK-style communication as last resort